Vaovao - Fomba fikojakojana ny fivoahan'ny fauxet
vokatra fandroana hafa
Fitaovana fandroana fandroana
Mandrovina vilany sy urina
Milentika ao an-dakozia
Taratasy vy vita amin'ny vy tsy misy fangarony
Laser fanapahana miasa
Vokatra vy hafa
asa kanto vy
Fomba fikojakojana ny fivoahan'ny fauxet
Rehefa avy nampiasaina elaela ny faucet hanana olana isan-karazany amin'ny lesoka, ary iray amin'izany ny famoahana rano. Entanina izao ny fitsitsiana angovo sy ny fiarovana ny tontolo iainana, ka rehefa mivoaka ny faucet dia mila amboarina ara-potoana na soloina vaovao faucet.Fitsangan-javatra mahazatra ny famoahana ny fanodinana. Ny olana madinidinika sasany dia azonao alamina. Raha miantso matihanina ianao dia indraindray tsy afaka miatrika azy ireo ara-potoana. Inona avy ireo antony mahazatra mahatonga ny fivoahan'ny faucet? Inona no fomba fikojakojana ananan'ny lesoka amin'ny fivoahana faucet?
Amin'ny ankapobeny, ny faucet dia misy rafitra mafana sy mangatsiaka, ka misy fidirana rano roa. Eo ambonin'ilay faucet dia misy famantarana manga sy mena. Ny famantarana manga dia maneho ny fivoahan'ny rano mangatsiaka, ary ny mena kosa maneho ny fivoahan'ny rano mafana. Ny rano dia mivoaka amin'ny mari-pana samihafa amin'ny alàlan'ny fihodinana amin'ny lalana samihafa. Io no foto-pitsipika miasa ihany toy ny palitao fandroana ao amin'ny fandroana, ny firafitry ny faucet dia manan-tànana ihany koa, izay azo ampiasaina hampandehanana ny fantsom-pamokarana malalaka. Ny fonony ambony dia ampiasaina hanamboarana ny firafitry ny faucet. Ny afovoany misy modely vita amin'ny kofehy dia rakotra peratra hoditra ao anatiny, ary ny ao ambany dia fidirana rano roa hiantohana ny fampiasana ny faucet.
1. Tsy mihidy mafy ny paompyRaha tsy mihidy mafy ny paompy dia mety ho simba ilay gasket ao anaty paompy. Misy gasket plastika ao anaty faucet, ary ny kalitaon'ny gasket amin'ny marika isan-karazany dia tena samy hafa ihany koa, fa amin'ity tranga ity, soloy fotsiny ireo gasket!
2. Famoahana rano manodidina ny vodin-tsiranoka faucet
Raha misy fivoahana rano manodidina ny valan'afo amin'ny faucet dia mety hateraky ny hery tafahoatra izany rehefa mamily ny faucet amin'ny fotoana mahazatra, ka miteraka fahaleovan-tena na fisarahana amin'ilay mpanelanelana napetraka. Esory fotsiny ary apetraho indray ny faucet ary henjano izy. Raha be loatra ny fanodinan-drano dia tokony hofehezina amin'ny lakaoly fitaratra izy io.
3. Mivoaka ny banga bolt an'ny paompy
Raha misy fivoahana rano sy olana mitete ny faucet dia mety misy olana ilay gasket. Amin'izao fotoana izao, esory fotsiny ny faucet raha hitany na tapaka ilay gasket, raha mbola amboarina sy soloina ara-potoana!
4. Rano amoron-drano amin'ny fantson-drano
Raha misy fantson-drano eo amin'ny fantson-drano, dia matetika ilay voanio faucet no malalaka na harafesina noho ny fotoana fiasana lava. Mividiana iray vaovao na asio gasket fanampiny hisorohana ny fidiran'ny rano.
Misy teboka roa tokony hijerena rehefa mivoaka ny faucet. Voalohany, rehefa mivoaka ny faucet dia tsy tokony hidina ny vavahady lehibe hisorohana ny "tondra-drano" ao an-trano. Faharoa, ny fitaovana fikojakojana dia tokony ho voaomana, ary ny ampahany nesorina dia tokony hapetraka amin'ny fomba milamina, mba tsy ho azo apetraka.
Amin'ny fiainana andavan'andro dia tokony hampiasa ara-dalàna ny faucet isika. Tsy afaka manamafy ny faucet isika isaky ny mandeha. Tokony hampivelatra fahazarana fampiasana tsara isika ary hitazona izany amin'ny toetra voajanahary. Io fomba io ihany no ahafahantsika misoroka tsara ny fivoahan'ny faucet.
Fotoana fandefasana: Mey-12-2021
Soso-kevitra momba ny fividianana faucet ao an-dakozia
Inona ny fauxet napetraka amin'ny rindrina?
Fitaovana ilaina amin'ny kabinetra ao an-dakozia
No.9 Zhongzhen Road, Luocun, Shishan Town, Distrikan'i Nanhai, Foshan City, Provinsi Guangdong, Sina.